Ubuntu Web inoburitsa yekutanga test ISO. Chrome OS haisisiri yega | Linux Vakapindwa muropa
Zhizha rapfuura tinotaura newe pamusoro zvishoma Ubuntu Webhu, iyo inoitirwa kuve yemahara imwe nzira kuGoogle's Chrome OS. Isu taiziva zvishoma, kupfuura izvozvo zvaizobva paUbuntu neFirefox, uye pakanga pasina ruzivo rwakawanda nekuti avo vakave nepamuviri uye vari kuvandudza chirongwa ichi ndivo vamwe chete vari kumashure kweUbuntu Kubatana, uko ivo vari kutarisisa kwavo kwese kuedza. Kana saka zvaive, kusvikira nhasi.
Uye ndezvekuti, asingasviki maawa makumi maviri nemana apfuura, mugadziri mukuru weUbuntu Unity uye Ubuntu Web Yakazivisa muUbuntu forum iyo ivo vatove neiyo yekutanga ISO mufananidzo wakagadzirira yewebhu yako inoshanda sisitimu, pamwe neruzivo rwekutanga rwakakosha nezvazvo. Pakati peizvi, isu tinayo kuti nhamba yayo ndeye 20.04.1, izvo zvaizoreva kuti yakavakirwa pane yekutanga kugadzirisa kugadzirisa kweFocal Fossa, kurodha ma link uye zvimwe zvinhu.
Ubuntu Webhu ikozvino inogona kuyedzwa muGNOME Mabhokisi
Ubuntu Web 20.04.1 inopa zvinotevera:
Tinogona kugadzira edu eappapps tichishandisa matekinoroji ewebhu, kugadzira desktop package uye nekuzviisa nyore.
Kune chitoro chekuyedza chinonzi wapp chitoro chatingawana kubva store.ubuntuweb.co. Ikoko tinowana, semuenzaniso, Google Kirasi.
Kubatanidzwa nemasevhisi emakore mushure mekumisikidzwa kubva pakutanga. Mune ramangwana, kusangana neiyo wapp chitoro kuchavandudza.
Tsigiro yeApple maapplication mushure mekumisikidzwa kubva pakutanga, chimwe chinhu chinogoneka nekuda kweAnbox.
Kubva pane zvishoma zvandakaedza, Ubuntu Web inotaridzika senge Ubuntu mune yayo huru edition. Dhoku iri pazasi, asi kudzvanya pane inoshanda system logo inovhura iyo GNOME chikumbiro chekutanga. Pakati pemapurogiramu isu tine mamwe mawebhusaiti, senge Twitter, iyo inovhura Firefox yakananga, asi vamwe kubva kuLinux, senge GParted, iyo yekumisikidza app kana Anbox, iyo ichave iri imwe yeakasimba mapoinzi eiyi inoshanda system kana ichifambira mberi. nguva.
Ini ndinofunga kuchiri kukurumidza kwazvo kuziva kana Ubuntu Web ichakwanisa kumira kuChannel OS, asi iri inoenderana neLinux neApple maapplicationlightweight, uye inogona kuiswa pane chero komputa, ungangozadzisa zvinangwa zvako. Kunyangwe achibudirira kana kwete, inguva chete inoziva.
Kana iwe uchifarira, unogona kurodha pasi Ubuntu Web 20.04.1 ISO kubva Iyi link.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » General » Noticias » Ubuntu Web inoburitsa yekutanga test ISO. Chrome OS haisisiri yega
Nei iri webhusaiti yekurodha isina chitupa cheSSL?
Icho chekucherechedza chete, hachisi chekuunza gakava, asi zvinoita sekunge zvisina kuchengeteka kurodha pasi chinhu kubva kune http webhusaiti, haufunge?